Nepal Deep | माधव नेपालको व्यवहार सामन्तीले नोकरलाई थर्काए जस्तो: नारदमुनि राना
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि रानाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सामन्ती प्रवृति छताछुल्ल भएको बताएका छन्। रानाले संसदीय समितिमा नेता नेपालले देखाएको दम्भ कुनै पनि दृष्टिबाट कम्युनिस्ट चरित्र नभएको बताएका हुन्।
रानाले भने, ‘माधव नेपालले मालिकले नोक्करलाई हप्काए जस्तो सामन्ती प्रवृति देखाउनु भयो। उहाँले केपी ओलीलाई घमण्डी, अंहकारी, सामन्ती भन्नुहुन्थ्यो। तर घमण्डी, अंहकारी र सामान्ती को रहेछ अब स्पष्ट भएको छ। घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो।’
रानाले सार्वभौम संसदमा आफूले आफ्ना कुराहरु राख्न पाउने हक भएपनि त्यो हक नेपालले छिन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।देशसञ्चार अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भने,‘ संसदीय समिति माधव नेपालको दाईले ल्याएको हो र? उहाँले भनेको मैले मान्छु? उहाँ समितिको सभापति हो र? समितिमा नेपाल र मेरो हैसियत समान छ।’
रानाले नेपाल र उनी पक्षधर सांसदहरुले आफूहरुमाथि प्रतिगमको मतियारको आरोप लागेपछि, बोल्न नपाउने, संसद र संसदीय समितिमै सामेल हुन नपाउने अभिव्यक्तिहरु दिएपछि आफू मौन बस्न नसकेको बताएका छन्।
आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एमालेका दुई पक्षबीच भनाभन भएको छ। बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेता नारदमुनि रानाले घोचपेच गर्न थालेपछि विवाद भएको हो।
बैठकमा सुरुमा बोल्दै नेपालले संसद् पुनर्जीवित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। नेता नेपाललगायत बोलेको केही समयपछि बैठकमा सांसद राना प्रवेश गरे। उनले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि नेता नेपालप्रति कटाक्ष गर्न थाले। उनले संसद्लाई जनताले नभई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको बताए। उनले संसद् चाहिनेहरू वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिइरहेका बेला कहाँ थिए भन्दै प्रश्न गरे।
रानाले भने, ‘आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा घरमा गएर सुत्ने अनि संसद् चाहिन्छ भन्ने? यो संसद् अदालतले ल्याएको हो, जनताले होइन। वरिष्ठ नेताहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
सांसद रानाले नेता नेपालसहितका सांसदप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्ना भनाइलाई निरन्तरता दिएपछि नेपाल पक्षका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट आक्रोशित भए। त्यसपछि नेता नेपाल पनि बोल्न थाले।
आक्रोशित हुँदै नेता नेपाल र सांसद भट्टले ‘प्रतिगमनका मतियारहरू बाहिर जानुस्’ भने। प्रतिगमनलाई साथ दिने अनि समितिमा आएर जथाभावी भनेको भन्दै नेपाल र भट्टलगायत कांग्रेसका सांसदहरू पनि सांसद रानामाथि खनिए। रानाले अनावश्यक कुरा गरेको भन्दै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाए।